Nanohina ny mpisera ho mpanavakava-bolonkoditra ny lohatenim-baovaon’ny France24 momba ny COVID-19 aty Afrika · Global Voices teny Malagasy
Gaga ny manam-pahaizana sasany fa tsy nahitana trangana COVID-19 maro aty Afrika
Voadika ny 12 Marsa 2020 5:55 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Français, Italiano, українська, عربي, English
Pikantsarin'ny France 24 tamin'ny 01 Martsa, lohatenim-baovao tao amin'ny France24 ho an'ny fitantarana ny COVID-19
Tamin'ny 1 Martsa 2020, nitatitra momba ny tranganà COVID-19 vitsy dia vitsy aty Afrika ny France24, vavahadim-baovao frantsay, tamin'ity lohatenim-baovao niteraka olana ity hoe “Miaraka amin'ny tranga ofisialy miisa telo, manitikitika ny manampahaizana momba ny fahasalamana ny tahan'ny coronavirus ambany aty Afrika”:
Na resaka tsy fahombiazan'ny fitiliana, na antony ara-toe-tany na kisendrasendra tsara vintana fotsiny dia mbola manitikitika sy mampanahy ny manam-pahaizana ny fahitana miavaka ny tahan'ny valan'aretina coronavirus ambany aty amin'ireo firenena Afrikanina, ahitana ireo rafitra ara-pahasalamana marefo.
Manontany ny antony mahatonga ny tahan'ny aretina COVID-19 ambany aty Afrika izay aretina mahafaty sy mifindra ny tantara. Maro ny mpisera no nahita ny lohateny ho olana rehefa namaky satria nampatsiahy ilay profesora Melissa Graboyes izay namaritra ny fanehoana hevidraikitra ny endrik'i Afrika ho toy ny kaontinanta rotiky ny aretina izany.
Tamin'ny 3 Martsa, lohalaharana i Shina amin'ny tranga miisa 80.303 voatatitra amin'ireo trangana COVID-19 maneran-tany miisa 90 892 ary manaraka azy i Korea Atsimo izay nahitana tranga miisa 4.812, Italia 2.038 ary Iran 1.501, araka ny filazan'ny Fikambanana Erantanin'ny Fahasalamana (OMS).
Mampiseho ihany koa ny tatitra momba ireo tranga avy amin'ny OMS fa nahitana tranga miisa dimy tao Alzeria, samy nahitana tranga iray avy tao Tonizia sy Maraoka raha misy mararin'ny COVID-19 roa kosa ao Egypta. Tamin'ny 27 Febroary lasa teo, lasa firenena voalohany tany Afrika Atsimon'i Sahara nanamafy ny fisian'ny aretina COVID-19 tao Nizeria ary nanaraka azy i Sénégal. Lehilahy Italiana iray no voatondro fa narary tao Nizeria; teratany Frantsay no narary voalohany tao Senegal ary Maraokana iray monina any Italia ny tranga voatondro tao Maraoka.
Vakio: Italiana ilay tondroin'ny tranga COVID-19 tao Nizeria
Tohina tamin'ny lohatenim-baovao ireo mpisera Afrikana
“Nahoana no misy olona manahy fa tsy miparitaka ny viriosy mamono ?” hoy i Oluniyi, mpisera Nizeriana, nanontany:
Namaky izany aho ary izao no vakiny. Tsy hoe “mampitolagaga” fotsiny ihany izany hanitikitihantsika ny sain'ny siantifika fa sady “mampanahy” fa tsy mihanaka haingana aty Afrika ny corona viriosy. Nahoana no misy olona matahotra fa tsy miparitaka ny viriosy mamono?
Nanakiana an'io fanovana ny “maha-olombelona ny vahoaka” ho” fitaovana fitantarana ” io i Dr Furaha Asani:
Lasa fitaovana ampiasaina hamongarana fitantarana sisa ny vahoaka rehefa tsy ankatoavinao ny maha-olombelona azy ireo. Izany no antony tsy ahatakaranao ny fomba ahasahian'izy ireo hanao ny tsara kokoa na mandroso kokoa amin'ny zavatra rehetra. Satria tokoa mantsy dia mbola mahatsapa sy mino ianao fa ambony kokoa.
Sosotra i Nimah, avy any Nizeria, fa ho hadihadiana i Afrika noho ny tsy fananany trangana COVID-19 maro:
Mahasorena ahy tanteraka ny mahita ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena “manadihady” ny firenena Afrikana noho ny tsy fananany trangana #COVID19 maro !
Maninona tsara hoe?!?!
Namaritra ilay tati-baovao ho fanavakavaham-bolonkoditra ilay Ghaneana Mac Jordan:
Tena antsoina hoe “manam-pahaizana ara-pahasalamana” tokoa ve izy ireo ? Mampalahelo ity lohateny ity.
Nanitsy ny lohateny ho azy ireo i Lemme:
“Vaovao farany CoronaVirus : Amin'ny tranga ofisialy telo monja, mampitolagaga ireo manam-pahaizana fotsy hoditra MPANAVAKAVA-BOLONKODITRA momba ny fahasalamana ny tahan'ny coronavirus any Afrika.”
Mamindra aretina amin'ny firenena mahantra ihany koa ny firenena mandroso
Nentin'ny Italiana iray tany Nizeria ny COVID-19. Eso izany milaza ny famindrana aretina avy amin'ireo firenena mandroso toa an'i Italia ho any amin'ny firenena “vongany” [mg] toa an'i Nizeria.
Avy amin'ny mpitsangatsangana Italiana nankany Nizeria no nahitana ny trangana Corona Virus voalohany tany Nizeria ary ahitana tranga maro kokoa i Etazonia noho i Meksika.
Esory ny fiheverana fa “ny firenena mahantra foana no mamindra aretina amin'ny firenena manankarena”.
Efa ela no natao làlana namindrana aretina mankany amin'ireo firenena Afrikana ny fanjanahan-tany Eoropeana.
Nilaza i Dr. Sam Okuonzi raha nanoratra tao amin'ny gazety mpivoaka isan'andro ao Ogandà New Vision, fa “areti-mifindra miisa enina no saika nahatonga ny fahafatesan'olona tany amin'ny fanjakana Britanika” (raboka, tefoedra, kolera, valan-dra, nendra) tamin'ny taona 1839. Tsy nisy “firaketana na tantara” nilaza fa nisy ireo aretina ireo ” tany ivelan'ny Eorazia talohan'ny nahatongavan'ny anjoria Eoropeana.”
Nampidirin'ny mpanjanaka Portiogey tany Afrika Andrefana ny nendra tamin'ny taonjato faha-15, araka ny filazan'ny Foibe Mpanara-maso sy Fisorohana ny Aretina.
Nanamarika ny Global Black History, arsiva nomerika mirakitra ny tantara Afrikana, fa ireo mpivarotra italiana no nampiditra ny aretina pestan'omby tany Tanzania, Kenya, Malawi, Zambia ary Afrika Atsimo tany am-piandohan'ny taompolo 1890. Nanamafy ny Global Black History taty aoriana fa nahatonga lamina vaovao amin'ny fanjanahan-tany ny fampidirana ny “varotra andevo tany Afrika Atsinanana” izay nahatonga ny fiparitahan'ny lalitra tsetse tompon'andraikitra tamin'ny fahafatesan'ny “olona miisa 200.000 teo ho eo” noho ny “aretin'ny fatoriana” avy any “Kongo, nankany amin'ny Farihy Tanganyika ary tany Zambia ny farany. ”
Fianarana avy amin'ny firenena mahantra kokoa
Mirona kokoa mankany amin'ny hevi-draikitra sy ny tsy fandinihana lalina ny fandrafetana ny vaovao tantarain'ny fampahalalam-baovao mahazatra momba ny voina lehibe. Manoloana ny vaovao miiba tsy tapaka momba an'i Afrika dia mora ny miteny fa tsy misy zavatra miabo mitranga ao amin'ity kaontinanta ity.
Tsy mbola niparitaka tao amin'ny kaontinanta — araka ny natahoran'ny manam-pahaizana — ny viriosy COVID-19 noho ny antony maro samihafa. Antony lehibe iray — izay tsy araka ny fiheverana an'i Afrika ho toy ny kaontinanta lasibatry ny aretina — fa liana kokoa amin'ny fiadiana amin'ny areti-mifindra ny matihanina amin'ny fahasalamana Afrikana.
Tamin'ny taona 2012, maherin'ny 50 isan-jato amin'ny trangana lefa-kozatra manerantany ny tao Nizeria, ilay firenena be mponina indrindra aty Afrika nahitana ankizy miisa 200 eo ho eo tratran'ity aretina ity, hoy ny OMS.
Tamin'ny taona 2014, nohamafisin'ny OMS fa tsy nisy trangana viriosin'ny lefa-kozatra hita tao Nizeria ary “tsy nisy tranga vaovao “voamarina tany amin'ny laboratoaran'ny angondrakitra rehetra”. Vokatr'izany, tamin'ny taona 2015, nesorin'ny OMS tamin'ny lisitr'ireo firenena miady amin'ny lefa-kozatra i Nizeria .
Nahatratra an'io tanjona manan-tantara io i Nizeria tamin'ny alàlan'ny “nanafoanany ny fifindran'ny virosin'ny lefa-kozatra tao anatin'ny 15 volana.” – zava-bita izay nihoatra ny tanjon'ny OMS.
Tsy mitranga eo no eo ny fiovana tampoka toy izany. Nila fahaizana manokana mba hanatrarana izany.
Natomboka tamin'ny taona 2014 nandritra ny fihanaky ny Ebola tany Nizeria ny arofenitra novolavolaina ho famongorana ny lefa-kozatra. Nanara-maso ireo tratry ny aretina avy amin'ny marary nitondra ny aretina ireo mpiasan'ny fahasalamana Nizeriana, izay nofaritana ho toy ny zava-bita miavaka tamin'ny asa fitsongoana ny valanaretina nataon'ny OMS .
Vokatr'izany dia nandefa matihanina ara-pahasalamana Nizeriana tokony ho 250 tany amin'ny firenena hafa tao Afrika Andrefana ny Vondrona Afrikana mba hiady amin'ny Ebola. Ankoatra izany ihany koa, nianatra ny fandresen'i Nizeria tamin'ny fihanaky ny Ebola ny “mpitsabo manam-pahaizana avy any Etazonia sy eran'izao tontolo izao” mba hampiarana ny vokatr'izany indray tany amin'ny fireneny, araka ny notaterin'ny ReliefWeb izay notohanan'ny ONU.
Aza adinoina fa ilay mpahay siansa Afrikana, Profesora Jean-Jacques Muyembe-Tamfum avy any amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo no nahita ny fanefitry ny Ebola.
Vakio: Jean-Jacques Muyembe-Tamfum: Ilay siantifika Kongoley nahita ny fitsaboana ny Ebola [mg]
Tsy nahagaga raha tsy dia be mpizara toy ny vaovao momba ny fahafatesana nateraky ny aretina Ebola tany Afrika ny zavatra hitan'i Muyembe-Tamfum.
Tsy misy hafa amin'izany indray ity momba ny COVID-19 ity:
Tena takatro amin'izay hoe nahoana ny mpahay siansa manerana izao tontolo izao no gaga amin'ny Afrika izay tsy ahitana afa-tsy trangan'aretina coronavirus miisa 3 fotsiny. Angamba haintsika ihany koa ny vahaolana momba izany.
Areti-mifindra mahavoa ny olon-drehetra eran'izao tontolo izao ny COVID-19: fotoana ho an'ny Tandrefana izao hianarana zavatra iray na roa avy amin'ireo namany ao Afrika izay efa nisoroka ny COVID-19 tsy hihanaka ao amin'ny kaontinanta hatreto.